DF oo u ceeb qarisay ciidankeeda. - Caasimada Online
Home Warar DF oo u ceeb qarisay ciidankeeda.
DF oo u ceeb qarisay ciidankeeda.
Dowlada Soomaaliya ayaa beenisay in Ciidamada dowlada Soomaaliya ay dhac ka gaysteen Degmada Badhaadhe ee Gobolka Jubada hoose ka tirsan.
Warar la helay ayaa sheegayay in Ciidamada dowlada ee jooga Badhaadhe ay dhac iyo boob u gaysteen dadka shacabka ah ee ku nool degmadaas.
Arintaa waxa gaashaanka ku dhuftay Gudoomiyaha degmada Badhaadhe Faarax Haybe Xaaji oo lahadlay Saakay Warbaahinta Muqdisho waxaana uu warkaas ku cabiray inuu ahaa mid loogaga been abuuranayo Ciidamada Qaranka sida uu hadalka u dhigay.
Gudoomiyaha ayaa carabka ku dhuftay inay wadaan qorsha ah in Ciidamada Amaanka gobolkaas ay ku xaqiijin lahayeen ,isagoo xusay in ciidamada ay nabadayn ka wadaan deegaano ku dhow dhow degmada Badhaadhe.
Dhinaca kale Gudoomiyaha ayaa qeexay in Ceelal biyoodyo ay ka hergelin doonaan deegaano ka tirsan Degmada Badhaadhe oo biyo la’aan ay ka jirto.